कम्प्युटर कढ़ाई → कम्प्युटर कढ़ाई / P&M कपडा कढ़ाई
कपडा र कपडा चिह्न लगाउने कम्प्युटर कढ़ाई एउटा सबैभन्दा पहिचानयोग्य विधि हो। यो यसको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो कारण हो, जहाँ पुरानो समयका महिलाहरूले कपडाहरूमा हातैले कपड़ा बुन्न।
आजकल, कढ़ाई स्वचालित रूपमा कम्प्युटर द्वारा नियन्त्रित मेशिन प्रयोग गरी एक कढ़ाई प्रोग्रामको आधारमा लागू गरिन्छ, जुन प्रत्येक ग्राफिक डिजाइनको लागि व्यक्तिगत रूपमा सिर्जना गरिन्छ।
कपडामा सानो डिजाइनहरू पारंपरिक टी-शर्ट भन्दा बढीको वजनको साथ। निजीकृत कपडाका धेरै फाइदाहरू छन्। यस्तो उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहन्छ, कम्पनीको छविलाई सुदृढ पार्छ र वर्कवेयरको मामलामा टीमको बीचमा समुदायको भावना जगाउँदछ।
कपडा र कपडामा कम्प्युटर कढ़ाई कार्य गरिन्छ
कम्प्युटर कढ़ाई साहसका साथ टेक्सटाइल ग्याजेटको उत्पादनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ विज्ञापन लुगा. कढ़ाई लोगो र कम्पनी नाम Polówkach मा, झोला वा तौलिया ग्राहकहरु वा व्यापार साझेदारहरु को लागी एक राम्रो उपहार हुन सक्छ। त्यस्ता कपडाहरू वा विज्ञापन उत्पादहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले ब्रान्डलाई प्रमोट गर्नेछन्।
कपडा बाहेक, कढ़ाई प्राय: जस्तै झोला, टोपी, तौलिए र नहाल्ने सामानहरूमा बनाइन्छ। कढ़ाई लोगो निश्चित रूपमा स्टिक-अन ग्राफिक्स प्रयोग गरेर चिह्नित गर्ने वैकल्पिक विधिहरू भन्दा शोषणको लागि अधिक प्रतिरोधी हो।
कम्प्युटर कढ़ाईको परम्परा
कारावास पुरातात्वका लागि परिचित सजावटको एक विधि हो, जब महिलाले कपडा, टेबलक्लोथहरू र झण्डाका हातले एम्ब्रोइडर्ड पैटर्नहरू। सुन्दरता र कढ़ाई को स्थायित्वले तिनीहरूलाई धेरै संस्कृतिहरूको एक तत्व बनाएको छ, साथै साथै लोक पोशाक र ब्यानरको रूपमा केही क्षेत्रहरूको प्रतीक हो।
उच्च गुणवत्ता र कढ़ाई चिह्नको टिकाऊपनले आधुनिक विज्ञापनमा पनि अनुप्रयोग पाएको छ। कम्पनीको लोगो संग लुगा लगाएका कर्मचारीहरु अक्सर भरोसायोग्य र बेनामी कम्पनीहरु को प्रतिनिधि को रूप मा मानिन्छ। तौलिए वा बाथरोबको रूपमा होटल कपडाले लोगोको साथ होटलको प्रतिष्ठा बढाउँदछ।
वेटर र एस्ट्रोन वा एप्रोन जस्ता व्यक्तिगत ग्यास्ट्रोनमिक टेक्सटाइलले सुसज्जित रेस्टोररहरू पनि ब्रान्डसँग मिल्दो मानिन्छ, र यसले अधिक विश्वासलाई प्रेरित गर्दछ, जसले अक्सर ग्राहक खरीद निर्णयहरूमा अनुवाद गर्दछ। कढ़ाई विज्ञापन ग्याजेटहरू पनि हो जुन सकारात्मक रूपले प्राप्त गरियो।
झोला, क्याप, टी-शर्टको रूपमा सजावट गरिएको ग्याजेटहरू प्राय: कम्पनीहरूले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा यसको प्रमोशनको रूपमा वा ग्राहकहरूको स्वतन्त्रताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
कम्प्युटर कढ़ाईका लागि मेशिन पार्क
आधुनिक टेक्नोलोजी र वर्तमान सम्भावनाहरूले हामीलाई कढ़ाईका साथ उत्पादनहरूको बढ्दो बजार माग पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। आधुनिक मेशिनहरूका लागि धन्यवाद, आज यो डिजाइनको शुद्धतालाई कायम राख्दै छोटो समयमा हजारौं कढ़ाईहरू गर्न सम्भव छ। यो आर्थिक विकास पनि कढ़ाईको लागि एक आकर्षक मूल्यमा अनुवाद गर्दछ।
कम्प्युटर कढ़ाई - टेक्नोलोजी हाम्रो डिस्पोजलमा
आधुनिक मेशिनहरूमा असंख्य सुईहरू हुन्छन् जसमा धागो र colors्ग परियोजनाको लागि उपयुक्त हुन्छन्। कढ़ाई प्रक्रिया एक कम्प्युटर प्रोग्राम द्वारा प्रबंधित गरिएको छ जहाँ डिजाइन अपलोड गरिएको छ। यो हाम्रो तर्फ हो कढ़ाई र यसको आकार लागू गर्न उपयुक्त स्थान निर्धारण गर्न। साना प्रोजेक्टहरूको लागि कढ़ाई सिफारिस गरिएको छ, त्यसैले यो प्रिन्टिंग लोगो, कम्पनीको नाम, संस्था र स्कूलहरूको लागि लोकप्रिय छ।
कम्प्यूटर भरतका फाइदाहरू र नोक्सानहरू
प्रतीकको साथ कपडाको उपस्थिति यस्तो चीज हो जुन यसलाई बाहिर अलग गर्दछ। निश्चित रूपमा बनाईएको कढ़ाईले कपडालाई नयाँ गुण र भव्यता दिन्छ, र यसको विज्ञापन गरिएको ब्रान्डले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ कुनै चिन्ता लिनु आवश्यक छैन कि ग्राफिक्स वा पाठ धुनेमा वा प्रयोगको लामो अवधि पछि बन्द हुनेछ।
कम्प्युटर कढ़ाई कपडाको अभिन्न अंग हो, जसले यसलाई अन्य विधिहरूमा महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउँदछ जुन छोडिन्छ वा क्रमिक चिपिंगद्वारा गुफा सिर्जना गर्दछ। कम्प्युटर कढ़ाई लगभग कुनै र colorको हुन सक्छ। केवल सीमितता प्रयोग गरिएको थ्रेडको रंग हो।
कम्प्युटर नियन्त्रणको लागि शल्य चिकित्सा सटीक धन्यवादको साथ एम्बेडेरि performed गरिएको छ। टेकनिक र कम्प्युटर कढ़ाई को परिशुद्धता कढ़ाई बान्की को उच्च रिजोलुसन को लागी अनुमति दिन्छ। कढ़ाई केवल ठूलो मात्राको साथ भुक्तानी गर्दछ।
थप फाइदा भनेको एक कढ़ाई प्रोग्राम तयारीको एक समयको लागत हो, जुन हाम्रो डाटाबेसमा राम्रो रहन्छ। तसर्थ, भविष्यमा, यदि ग्राहक एकै डिजाइनको साथ पुनः-अर्डर कपडामा फर्कन्छ भने, उसलाई कार्यक्रम शुल्कबाट छुट दिइनेछ।
कम्प्युटर कढ़ाईमा पनि बेफाइदाहरू छन्, तर ती सामग्री र डिजाइनको लागि उपयुक्त मार्किंग विधि छनौट गरेर बच्न सकिन्छ। यसैले सम्भावित दोषहरू हटाउनको लागि तपाईंको पहिलो मार्कि commission सुरु गर्नु अघि पेशेवरहरूलाई सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइन्छ।
पूर्ण सतह कम्प्युटर प्रिन्टिंगको विपरित, कढ़ाई असीमित र range्गको साथ पूर्ण ग्राफिक सीउन प्रयोग गर्न सकिँदैन।
जे होस्, यो के हो यो सबैको बारेमा हो। कढ़ाई परम्पराको सन्दर्भ हो किनकि यो हतियारको पोशाकको रूपमा उत्कृष्ट कपडाहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो kitschy, धोउन योग्य चित्रहरु संग के गर्न को लागी केहि छैन।
१ 190 ० g / m भन्दा कम न्यून व्याकरणको साथ सामग्रीमा कढ़ाई सिफारिश गरिदैन2। ठूलो कढ़ाईले "ढाल" को छाप दिनेछ, यो प्रयोगको बखत जटिल हुनेछ, र पातलो सामग्रीमा प्रयोग गर्दा - सियोले यस्तो पातलो सामग्री पंचर गर्न सक्दछ।
कम्प्युटर कढ़ाई लागत कति छ?
कम्प्युटर कढ़ाई तुलनात्मक रूपमा छ आर्थिक। यद्यपि, धेरै कारकहरूले सही मूल्यांकनमा भूमिका खेल्छन्। अधिक उत्पादनहरू क्रमबद्ध गर्दा व्यक्तिगत कढ़ाई सस्तो हुन्छ। थप रूपमा, कढ़ाईको आकार र ग्राफिक्सको जटिलताले मूल्यमा ठूलो असर पार्दछ, जुन कढ़ाई घनत्वको मूल्यांकनमा अनुवाद गर्दछ। ठूला कढ़ाई, अधिक पटहरू, संयोजनहरू र ठूला आकारहरू, अधिक घनका कढ़ाई। साथै स्थानहरूको संख्या जहाँ कढ़ाई राख्नु पर्ने छ (उदाहरणका लागि अगाडि लोगो बायाँ छातीमा + लोगो पछाडिको बीचमा) इकाई मूल्य निर्धारणको लागि महत्त्वपूर्ण छ। मूल्य सामान्यतया प्रयोग गरिएको र colors्गको संख्याबाट प्रभावित हुँदैन, किनभने सिलाउने मेसिनमा धेरै थ्रेडहरू छन्। तयारी को लागत पहिलो कढ़ाई क्रम मा जोड्नु पर्छ कढ़ाई कार्यक्रमजुन हाम्रो डाटाबेसमा पहिले देखि नै छ र यसैले त्यसपछिको अर्डरहरूमा थपिएको छैन।
कम्प्युटर कढ़ाईकपडामा कढ़ाईकढ़ाईको साथ टी-शर्टलोगोको साथ टी-शर्टलोगो सहित लुगाशिलालेख संग लुगापोलोटी-शर्टमा कढ़ाई चिह्नित गर्दैलोगोको साथ कपडा चिह्नित कपडा